Randriarimalala Harijaona : “Tena niasa ny Filoha” -
AccueilSongandinaRandriarimalala Harijaona : “Tena niasa ny Filoha”
Randriarimalala Harijaona : “Tena niasa ny Filoha”
15/05/2018 admintriatra Songandina 0
Samy sarotiny amin’ny hitohizan’ny fampandrosoana avokoa ny rehetra amin’izao fotoana izao, ary tsy misy miantso afa-tsy ny filaminan’ny firenena. Satria tokoa samy tompon’andraikitra eto amin’ ny firenena dia samy hotsarain’ ny tantara avokoa, ka ny hanatsarana ny firenena amin’ny tsy fisian’ ny ra mandriaka sy ny antso amin’ny filaminana no iraisan’ny antson’ny besinimaro amin’ izao fotoana izao. Mitohy hatrany izany antso izany amin’izao fotoana izao, indrindra manoloana ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny, dia ny fisavorovoroana izany. Ho an’ny solombavambahoaka Randriarimalala Harijaona dia nambarany fa tsy ilaina ny korontana, ary ny fifidianana irery ihany no vahaolan’ ny firenena. “Hafatra tiana hotenenina, isika vahoaka malagasy no hijery, isika vahoaka Malagasy hamantatra ny tantaran’ny ho avin’ny firenena fa ny zavatra azonay atao dia misaotra anao, mankahery anao. Ny anay dia ny fifidianana ihany no lalana iray hahafahana mametraka an’ity Madagasikara ity ao anatin’ny filaminana” hoy ity solombavambahoaka lany tao Atsimondrano ity.
Nandritra ny fandraisam-pitenenany teny amin’ ny lapan’ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena nandritra ny fanokafana ny herinandro ho an’ny vaksiny aty Afrika moa no nanambarany izany, ary tamin’ izany ihany koa no nanazavan’ ity solombavambahoaka ity ny mikasika ny lalàm-pifidianana izay nofidian’ ny solombavam-bahoaka satria olona madio hoy izy no ilaina. “Hiarahantsika mahalala ny olana tao anatin’izay herinandro vitsy izay, raha nisy ireny hetsika ireny, nolazaina fa noho ny fandanianay ny lalàna mikasika ny lalàm-pifidianana tao amin’ny antenimieram-pirenena. Ry vahoaka malagasy, raha nandaniana iny lalam-pifidianana iny izahay solombavambahoaka 79 dia hitanay fa lalàm-pifidianana hitondra amin’ny fifidianana mirindra, milamina ary tena manaraka ny rafitra mangarahara. Ohatra amin’ izany ny hialana amin’ ny tsimatimanota, fampiasana vola maloto”.
Na dia eo aza moa ny fanaratsiana sy ny fanelezana vaovao tsy marina fa tsy niasa ny filoham-pirenena , dia nanitsy izany fomba filaza diso izany ny solombavambahoaka Randriarimalala Harijaona . “Andriamatoa filoha, manontany tena ihany izahay hoe, ny sasany ve no tsy mahita sa sanatria mody tsy mahita izay asa lehibe nataonao izay. Fa izahay vahoaka malagasy dia mahita, ary resy lahatra fa niasa nanao asa ianao nandritra izay 4 taona mahery izay, ary mino izahay fa mbola hotohizanareo izany’’. Tsy hohadinony ity solombavambahoaka lany tao Atsimondrano ity ihany koa moa manoloana ny zava misy amin’ izao fotoana izao ny nankahery ny filoham-pirenena sy nandrisika amin’ ny hanohizana ny ezaka fampandrosoana “Andriamatoa filoham-pirenena, eto izahay vahoaka, mankasitraka ary Misaotra sy midera ny herimpo nananareo mivady nandritra izay 4 taona mahery izay, nijery ny vahoaka malagasy. Tsy vitan’ny teo amin’ny fahasalamana ihany fa teo amin’ny foto-drafitrasa maro isan-karazany. Na teo amin’ny fanaovana lalàna izany, teo amin’ny fanaovana barrage, resaka energie, fa indrindra indrindra resaka fahasalamana”.
Nangotraka ny katrok’ady teo amin’ny taranja kick-boxing omaly, tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Niditra tamin’ny andiany faharoa mantsy ny fifaninanana kick-boxing nampitondraina ny anarana « Fantomas ». Araka izany, katrok’ady miisa 21 no tazana tamin’ny ...Tohiny